Alahady 02 janoary 2022 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahadin’ny taom-baovao EPIFANIA
Fiarahabana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino
Fiarahabana ireo zokiolona 70 taona no mihoatra
Alahady voalohany amin’ny taona 2022 ity alahady ity, hiainana ny lohahevitra vaovao eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Maharitra tsy miova ny Tompo ».
Notarihan-dRtoa Raharijaona Bodo ny fotoana ary ny Mpitandrina Rakotonindrainy Jaona, Sekretera Jeneralin’ny FJKM, no nitondra ny hafatra.
Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika (Apokalypsy 1 : 4b-5) dia niarahaba ny Mpitandrina Rakotonindrainy Jaona ny mpitarika milaloahan’ny namakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 34 : 1-10, ho fiderana an’Andriamanitra.
Natao ny hira FFPM 746 : 1,2,3 “Mifalia ry sakaiza !” taorian’izany, ary nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika.
Niantso an’Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ; Andriamanitra hatrizay ary ho mandrakizay. Nisaotra an’Andriamanitra nahafahana misitraka izao alahady voalohany amin’ny taona izao, nisaotra an’Andriamanitra izay mitana ny Teny fanekeny. Vaovao isan’andro ny famindram-pon’Andriamanitra amin’izao andro faha roa izao, mahatsiaro fa zava-tsoa no atolotr’
Andriamanitra izay tsy miova sy tsy mivadika.
Nangataka ny fiasan’ny Fanahy Masina hameno ny fo amam-panahy. Miantoraka mba hitondran’Andriamanitra ny fiainana manontolo mandritra ny 365 andro
Rakotondramboa Saholy, mpampianatra ao amin’ny K10B, no nanatanteraka izany.
Nivavaka izy teo am-piandohana.
Nizy zavatra nampisehony teny an-tananay ary nanontany izy hoe “Inona ity ?” Finday no teny an-tanany. Samy mahay tsara ny mikirakira finday ny betsaka ; ankoatra ny antso sy SMS dia misy “applications” maro. Raha tsy misy “batterie” ny finday dia tsy misy hilana azy. Isaka koa raha tsy misy an’i Jesoa Kristy dia tsy misy hilana azy. Izay rehetra mino an’i Jesoa ka manana Azy dia tena zava-dehibe fa zanak’Andriamanitra.
Jesoa dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy mila “batterie” ilaina fenoina isan’andro. Isika dia ohatran’ny finday, ka raha tsy manana an’i Jesoa Kristy dia tsy mandeha.
Hoy Jesoa ao amin’ny Jaona 15:5 “Izaho no voaloboka, ianareo no sampan.Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka Amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na Inona na inona”.
Mila fifandraisana amin’i Jesoa isan’andro amin’ny alalan’ny fiainam-bavaka isika. Ainga vaovao ny miaraka amin’i Jesoa ka tsy ho “low bat” fa manovo hery ao Aminy isan’andro. Ny fifandraisam-pitiavana isan’andro amin’ny Tompo no hahavitana zavatra araka ny sitrapon’Andriamanitra.
Nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sampana Sekoly Alahady nanao ny hira FFPM 452 : 1,4 “Tompo ô ! Ovay ny foko ” ary namarana tamin’ny vavaka ny tompon’anjara, nanamafy ny fangatahana mba hananana fifandraisana amin’i Jesoa isan’andro.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 150 : 1,3 “He! Tsara ny fonenanao”, mialoha ny vakiteny.
Randriamasimanana Hanta no nivavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina, nangataka ny Fanhy Masina, ary Rasolonjanahary Fidy no namaky misesy ny perikopa voalahatra. Samy Diakona ao amin’ny Vaomiera Asa Vavolombelona ireo tompon’anjara ireo.
Ny perikopa : Isaia 41 : 1 – 7 ; Matio 14 : 24- 36 ; 1 Jaona 1 : 5 – 10
Natao ny hira FFPM 451: 1,2 “Tompo ô! Tsy takatry ny saiko” mialoha ny toriteny.
Teo am-pandraisana fitenenana ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM dia niarahaba ny Mpitandrina mivady, ny Birao, ny Loholona, ny Diakona, ny Mpandray, ny katekomena, ny Fiangonana nomen’i Jesoa taona vaovao. Ary nivavaka, nisaotra an’i Jesoa hahafahana hiaino ny Teniny.
Nangatahany nosokafana ny Soratra Masina ao amin’ny Isaia 41 : 1-7 hanarahana ny hafatra.
Ny Bokin’i Isaia dia misy boky 66 ; ny Baiboly mizara roa : Testamenta Taloha sy Testamenta Vaovao. Ny Testamenta Taloha misy boky 39 : ao ny fahariana ary ao koa ny fahatezeran’Andriamanitra.
Ny Isaia 1-39 dia milaza izany fahatezeran’Andriamanitra izany ary ny Famonjen’Andriamanitra dia hita ao aminy toko 40-66.
Na tao anatin’ny fahababona aza ny vahoakan’Andriamanitra dia tao Andriamanitra no niasa, no niteny, nilaza fa na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana dia tsy miova Andriamanitra. Tsy azo ferana ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Tsy voafetran’ny toerana, tsy voafetran’ny taona, tsy voafetran’ny fahefan’izao tontolo izao fa Andriamanitra maharitra tsy miova Izy.
Zavatra roa lehibe no ampitain’Andriamanitra amintsika eto :
Andriamanitra mamonjy antsika (and 1-3)
Andriamanitra miasa eo amin’ny fianantsika (and 4-7)
1) Andriamanitra mamonjy antsika (and 1-3)
Ny hevitry ny teny hoe Isaia dia milaza hoe “Jehovah mamonjy”. Amin’ny fomba ahoana izany ? Mamaly an’izany ny Soratra Masina : “Mangina hihaino ahy ianareo, ry nosy” Isaia 41 : 1
Ny dikan’ny hoe “mangina” : “aza valiana intsony, aza toerina intsony izay zavatra lazaiko aminareo fa mihainoa ianareo” hoy Andriamanitra. Mia rereka isika, reraky ny fahotana sy ny adim-pianana isika nefa rehefa mahare ny Tenin’Andriamanitra dia mia matanjaka indray, mitombo hery. “ary aoka handroso hery ny firenena” Isaia 41 : 1. Andriamanitra tsy miova fa isika ovain’ny Tenin’Andriamanitra.
Andriamanitra no miantso anao, manasa anao (toa ny fanasana amin’ny fapakarambady, fanasana amin’ny fifaliana). Miantso amin’ny fahasoavana izay milaza hoe izao no fahamarinana hitondran’Andriamanitra anao. “Invitation” no dikany, fiantsona amin’ny fitahiana eto. Fa “convocation” no azonao raha mafy loha ianao.
Fibebahana no hiantson’Andriamanitra anao mba hiova ny toe-tsainao, hiova ny fonao. Asan’ny Fanahy Masina eo amintsika tsirairay avy izany. Rehefa tena ao anatin’ny famonjen’Andriamanitra isika dia mitombo hery satria voavela heloka.
Mitarika amin’ny fiadanana Andriamanitra. Hoy ny Isaia 41 : 3 : “Mipaoka ireo izy ka mandroso soa aman-tsara any amin’izay lalana tsy mbola nodiavin’ny tongony.” Ny teny hoe « soa aman-tsara » dia milaza hoe “fiadanana”. Tahaka izany i Abrahama, lalana tsy mbola nalehany akory no nitondran’Andriamanitra azy ; tahak’izany I Noa, zavatra tsy mbola nataony akory ny nampanaovin’Andriamanitra azy. Amin’izao fotoana, Jesoa Kristy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana no mitondra anao amin’ny fiadanana. Na ny sainao, na ny fanahinao, ny fiainanao manontolo omen’Andriamanitra famonjena, izany no tarihan’ny Tompo anao.
Ireo antso ataon’i Jesoa amintsika :
Antso 1 : ampy ho antsika Jesoa. Aza ampiana, aza analana. Famonjena tokana ny nataon’i Jesoa teo amin’ny hazofjaliana
Antso 2 : ampitomboy ny fahanginana, henoy ny Tenin’Andriamanitra, aoka hihaona amin’ny Tompo ianao fa mitabataba izao tontolo izao ka saortra ny mavaka hoe feon’iza izany.
Antso 3 : Aza matahotra an’izao tontolo izao, aza matahotra ilay ratsy mapihorohoro. Eny, manoloana izao valan’aretina izao dia ilaina ny miaro-tena, ilaina ny fitasaboana, ilaina ny fepetra ara-pahasalamana fa tsy izany no mahatonga antsika hatahotra hijoro vavolombelona akory. Efa resan’ny Tompo ny fahavalo farany dia ny fahafatesana fa tarihan’ny Tompo ho amin’ny fiadanana ianao. Fa na sabatra aza tonga vovoka, fa na zana-tsipika aza tonga tahaka ny mololo satria Andriamanitra tompon’ny fahefana rehetra no mitantana anao, mampahery anao. Torio ny Filazantsara.
Antontan’isa nomen’ny Firenena Mikambana :
.Faran’ny taona 2021 : 88 tapitrisa ny isan’ny Malagasy
.2030 : hitombo avo roa heny ny Malagasy, hi amaro ny tanora
.2050 : hitombo be ny Malagasy ka ho isan’ny firenena be mponina indrindra era-tanyeo
.2100 : ho 99 tapitrisa eo ny Malagasy .
Mangetaheta sy noana ny olona fa ny azo antoka hahazoana famonjena dia ny Tenin’Andriamanitra irery ihany, ka torio ny Filazantsara izay hanan’ny olona fiainam-baovao indray, fahariana vaovao indray, hahatsapana fa Andriamanitra mitondra ho amin’ny famonjena.
Aza manahy ny amin’izay hitondran’i Jesoa anao na dia tsy fantatrao akory aza. Tsy fantatrao ny rahampitso, tsy fantatrao ny rehefa avy eo fa ny anjaranao dia minoa an’i Jesoa izay mitondra anao ho amin’ny fiadanana. Aza matahotra na inona na inona tenenin’ny olona, aza manahy na inona na inona renao fa ny anjaranao dia ny mifikitra tsara amin’ny Teny fikasana nomen’ny Tompo : Mamonjy antsika Andriamanitra
2) Andriamanitra miasa eo amin’ny fianantsika (and 4-7)
“Iza moa no nanao sy nahavita izany, sady miantso ny taranaka maro hatramin’ny taloha? Izaho Jehovah no voalohany, ary hatramin’ny farany dia mbola Izaho ihany no Izy.” Isaia 41 : 4
Misy teny miverimberina eo amin’ny and 4 : “Iza moa no nanao sy nahavita izany ” Midika izany hoe miasa Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Asa hisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika izany. Ao anaty fahababona, ao anaty fijaliana, aretina, fahoriana , ady mangotraka sy fizahan-toetra…dia Andriamanitra maneho ny Asany mahagaga. Saingy rehefa nahazo soa ianao dia adinonao ny mihaona amin’Andriamanitra. Ny Asa avy amin’Andriamanitra anefa dia Asa hahafahanao manana faharetana ary mahatratra ny tanjona apetrak’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao.
Ny dikan’ny teny hoe fahotana, ankoatran’ny hoe faharatsiana, dia hoe tsy tratranao ny tanjona napetraky ny Tompo teo amin’ny fiainanao. Fa rehefa miasa ao anatintsika ny Fanahy Masina, miasa ao anatintsika Andriamanitra dia izay no hahatrarana ny tanjona, mihaotra ny tanjona izay heverinao akory aza. Izany no hitenenan’i Jesoa tamin’ny mpianatra manao hoe “Izay mino ahy, ny Asa ataoko no ataony koa, hanao Asa lehibe noho izany aza izy satria Izaho mankany amin’ny Ray”
Manarak’izany, manao Asa hahafahanao mampahery ny hafa ianao. Ary koa Asa hahafahan’ny hafa mahazo hery mandrakariva. “Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy nilaza tamin’ny rahalahiny avy hoe: Matokia.” Isaia 41 : 6. Rehefa manao Asan’Andriamanitra ianao dia mampahery ny hafa ianao ary misy fiombonana hahatsapanao mihitsy hoe tena miaraka amin’Andriamanitra.
Inona ny antson’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika ?
Antso 1 : Aza manahy ny hoaninao, aza manahy ny hotafianao, aza manahy izay hosotroinao fa katsao aloha ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanmpy anao ny zavatra rehetra.
Ny anjaranao, na inona na inona zava-mitranga maneran-tany, dia ny miazona an’i Jesoa.
Misy firehana telo maneran-tany amin’izao fotoana izao : Tena tia mivavaka ny olona ; Maro ny fivavahana mitranga ; Manomboka mihidy ny varavarana mankany amin’i Jesoa.
Ny anjaranao : katsoa aloha ny Fanjakan’Andriamanitra, izany no manokatra ny varavaran’ny lanitra omen’ny Tompo ho anao isan’andro.
Antso 2 : “Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy”. Manana asa ny Tompo.
Betsaka no very asa vokatr’ity valan’aretina ity. Fa an’Andriamanitra ny fahefana ety an-tany sy any an-danitra. An’Andriamanitra ny vokatra, an’Andriamanitra ny asa. Ny anjaranao dia ny mangataka amin’ny Tompo hoe “Omeo asa aho Tompo ô !” fa homeny ianao. Misy afaka mijoro vavolombelona ny amin’izany.
Hafatr’i Jesoa :
-Ampaherezo ny hafa fa aza zatra manakiana. Izany no mampiavaka ny zanak’Andriamanitra
-Aza matahotra, aza manahy, aza kivy na dia mandalo zava-tsarotra aza ianao ka tsy fantatrao akory izay hitondran’i Jesoa anao. Mandrosoa hatrany fa izany no hitondran’i Jesoa anao hanananao famonjena sy fahasoavana.
Ny hafatry ny Tompo omeny anao : Tena mivavaka, tena mivavaka, tena mivavaka ; kanefa koa : tena miasa, tena miasa, tena miasa ; ho anareo zanaka, zandry raha mbola mianatra ianareo : tena mianatra, tena mianatra, tena mianatra. Fa Andriamanitra maneho ny Fitiavany antsika rehefa tena matoky Azy isika.
Ny tanan’Andriamanitra lehibe noho ny tananao, ny fikasan’Andriamanitra lehibe noho ny fikasanao, ny tanjon’Andriamanitra lehibe noho ny tanjonao. Ny anjaranao di any manaiky hiara-hiasa amin’ny Tompo ary mino Azy fa Izy no Tompo sy Mpamonjy anao manome anao fifaliana sy fiadanana fa tsy miova Andriamanitra.
Maharitra sy tsy miova ny Tompo satria Andriamanitra mamonjy antsika. Hoy ny Soratra Masina hoe : “Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho” Isaia 41 : 10
Maharitri tsy miova ny Tompo satria Andriamanitra miasa foana eo amin’ny fiainantsika. Hoy ny Soratra Masina : “miasà amin’ny tahotra ny ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony.” Filipiana 2:12-13
Tsy nahatanteraka sitrapon’Andriamanitra isika raha araka ny hafatra nentin’ny mpanompony.
Tia antsika ny Tompo ary miala nenina manome ny sitrapony, mampahatsiahy fa tonga hamonjy Izy. Mifona isika satria matetika maniasia, tsy vonona mihaino ny feon’ny Tompo fa ny tabatan’izao tontolo izao no mandrebireby. Teny manova, mampahatanjaka, mampandresy, mampahery ny Tenin’Andriamanitra. Mpanota tsy mendrika isika fa sari-tahotra, mivadibadika.
Soa fa teo Jesoa izay tsy miova, manomana lalam-pamonjena ho an’ny zanaka adala.
Nangataka tamin’ny Tompo mba handray ny vavaka mangina fifonana sy fibebahana amin’izao taom-baovao izao. Jesoa efa nanolotra ny ainy mba hasahiantsika manao izao vavaka izao.
Natao ny hira FFPM 750: 3,4,5 “Marobe ny ratsy vita”.
“Mamindra fo sy miantra Jehovah, Mahari-po sady be famindram-po.” (Sal 103 : 8)
Ny famelan-keloka atolotry ny Tompo :
“Fitiavana mandrakizay no nitaivako anareo, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anareo. Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsivolonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka. ” (Jeremia 31 :3 ; Isaia 46 :4)
“Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.” (Salamo 32:1-2)
Rehefa avy nandray ny Teny famelan-keloka dia nitsangana nano ny hira FFPM 545: 1,3 “Endrey izany hafaliana”, avy eo dia niara-nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika.
Nanao ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa (STAF) : « Tsy miova fitia »
Rakotomanana Andry, Biraom-piangonana Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.
Ny Teny nentiny teo ampanombohana : “Matokia , fa Izaho ihany, aza matahotra. ” (Matio 14:27)
Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina :
-Foibe FJKM : Fanompoam-pivavahana eny Antsonjobe ny alahady 16 janoary 2022.
Fitrotrona am-bavaka ny Filohan’ny FJKM sy ny ankohonany sy ny taom-piasana;
In-droa ny fidirana : amin’ny 7 ora sy sasany sy amin’ny 10 ora
-Komity fankalazana ny faha 185 taona namonona maritiora : Hetsika FJKM, antsa-panahy lehibe ny alahady 16 janoary amin’ny 5 ora hariva, eto Amparibe Famonjena
-Izao alahady taom-baovao izao :
.Fiarahabana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino ary fiarahabana ihany koa ireo zoky olona feno 70 taona no miakatra.
.Rakitra “anniversaire” eny amin’ny alitra, tanterahan’ireo nahatratra ny tsingerin’andro nahaterahany tamin’ny volana desambra
-9 janoary : Fitondrana am-bavaka ireo tomponandraikitra rehetra eto amin’ny Fiangonana. Fidirana iray ihany. Hisy Asa sy Fampaherezana
-16 janoary : mikatona ny Fiangonana noho ny fanompoam-pivavahana ho tanteraha eny Antsonjobe
-23 janoary : alahadin’ny firaisan’ny Sampana. Fotoana fanokafana ny taom-pankalazan’ireo Rafitra (STK, STKZo, AFF, Gazety Taratry ny Famonjena). Fitsofandrano ny Komity sy ny Birao “Fisotron-dronono ny Mpitandrina”
Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina :
Nanamafy ny fisaorana ho an’ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM
Nanao fanentanana ny amin’ny fitrotrona am-bavaka ny fanompoam-pivavahana hatao eny Antsonjobe ny 16 janoary.
Nanao fanentanana ho tanteraka ny Vina sy Tondrozotra mandritra ity taona 2022 ity
Nanao ny fifampiarahabana ny Fiangonana noho ny taom-baovao.
Ny andin-tSoratra Masina ao amin’ny Romana 12:12a no nifampiarahabana : “mifalia amin’ny fanantenana …” Miteny izany amin’ny olona eo akaikiny ary miteny ny anaran’ilay olona.
Tamin’ny famaranana dia nampitsangana ny mpianakavin’ny finoana ny Mpitandrina ary niteny hoe : “Ry Amparibe Famonjena, mifalia amin’ny fanantenana”
Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ireo teraka volana desambra.
Sady niarahaba no nirary soa sy mirahaba nahatratra ny taona.
Ny Salamo 21 : 3 no andinin-tSoratra Masina natolotra azy ireo “Fa notsenainao fitahiana soa izy; teo an-dohany nasianao satro-boninahitra tena volamena.”
Nitondra am-bavaka azy ireo ny Fiangonana.
Ny hira HF 12 Feno toky no nohiraina mandritra ny nanaovan’izy ireo ny fanatitra teny amin’ny alitara.
23 ny isan’reo nanatrika ny fotoana tamin’ny 10 ora ary 36 tamin’ny 7 ora. Nitotaly 59 izany.
RANAIVOSON Jacky, Mpitambolam-piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana. “Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetra” Titosy 2:11
Novakiany ireo Voka-dehibe voaray mialohan’ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora. Hatreto dia nahatratra 23 439 000 Ar no voaray, ary mbola mandray hatrany mandritra ity volana janoary manontolo ity. Ireo Voady sy Raki-pisaorana : Fisaorana noho ny taona lasa ary fangatahana vavaka avy amin’ny Fiangonana ho salama sy noho ny asa very ; Fisaorana noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana ;
Fisaorana noho ny fahafahana nandalo teto an-tanindrazana ary fangatahana vavaka mba ho tafody somantsara. Ireo hira nangatahana : FFPM 164:1 ary ny FFPM 107:1 sy A16 natao tamin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 752:1 “O Ry Jesosy , ny anaranao” ho fanolorana ny rakitra, nofaranana tamin’ny Amena nohiraina.
Roa ny Asa Vavolombelona notanterahana tamin’ity fotoana ity :
Nangatahan’ny Mpitandrina hitsangana ireo zokiolona.
95 taona ny zokiny indrindra
Ny Tenin’ny Soratra Masina nomena azy ireo : “Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho,” Isa 46 : 4a
Rehefa vita ny fiarahabana azy ireo dia nanao ny hira FFPM 460 : 3 “Ny fitondrany soa”
Niroso teny amin’ny alitara ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino sy ny Birao-piangonana.
nanodidina ny alitara kosa ireo solo-tenan’ny Rafitra rehetra.
Razafimaharo Mamy no nitondra ny teny fiarahabana ary Rakotomanana Andry no nitondra am-bavaka. Samy Biraom-piangonana mpitantsoratra izy ireo. Nitsangana ny Fiangonana nandritra ny vavaka. Avy eo dia nilahatra daholo naneho ny marika hita maso.
Nanao ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho an’ny Rafitra sy ny Fiangonana ny Mpitandrina Raharijaona. Ary nanao hafatra sy fanentanana izy hoe faha roa amin’ny faran’ny amperin’asa izao ary koa ny faniriany dia ho tanteraka ny Vina sy ny Tondrozotra fa raha tomombana sy lavorary izany dia manana fiainana lavorary ho an’ny Tompo.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanohy ny fotoana tamin’ny vavaka fanfatahana.
Nidera an’Andriamanitra noho ny hafatra azo sy ny taona vaovao. Nivavaka ho an’ny Tomponandraikitra rehetra eo amin’ny sahan’ny FJKM, tsy adinoina Amparibe Famonjena. Nivavaka ho an’ny mpivavaka mifanatri-tava sy ny tsy mifanatri-rava, ny any Am-pielezana, ho an’ireo zokiolona izay harena sarobidy ho an’ny Fiangonana. Nitondra am-bavaka ny fiomanana sy fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana hatao eny Antsonjobe, ny tetikasan’ny Fiangonana, ho an’ireo izay hanao jobily sy fankalazana. Nametraka ny zavatra rehetra amin’ny Tompo fa fikasana ihany ny an’ny olombelona. Nivavaka ho an’ireo sahirana sy marary, ho an’ireo nanao rakipisaorana sy voady masina.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo niara-notononina izany.
Nitsangana ny Fiangonana nanao ny hira FFPM 747: 1,2,3 “Haleloia! Sambasamba!” ary novakiana ny tondrozotra 2022.
“Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olomboafidin’Andriamanitra sady masina no malala” (Rom 12:10, Kol 3:12b) “Samia misikina fanetre-tena ka mifanompoa fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ny manetry tena koa” 1 Pet 5:5b.
Natao ny hira “Mialoka Aminao” nofaranana tamin’ny Amena nohiraina ary nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina.
“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”
Nitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny fotoana.
Nohiraina ny hira FF 53 : 1 “Havaoziko ilay voady” teo am-piomanana. Novakina ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 “Masina, Masina”. Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 115 : 1, FFPM 90, FFPM 107.
Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanatazana ny Raki-pisaorana sy fanangonana ny kapoaka ny Antema 16.
Hafatra: “Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy. Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin’ny ranomasina aza ny tendrombohitra.” Salamo 46 : 1-2
Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano ary natao ny hira FFPM 338 “Arovy aho Tompo” nofaranana tamin’ny Amena nohiraina sy vavaka mangina.
Nitendry orga : Rabiazamaholy Mahery (mpiofana ho mpitendry orga) sy ny SMZM
Nikirakira ny fafana : Rabako Tovo
Nikirakira ny fanamafisam-peo : Andriamahefa Tina